Zvapupu zvaJehovha zvokuEurope
England: Hama nehanzvadzi dzichigamuchira vaenzi vakauya kugungano renyika dzakawanda
VANOGARAMO 743 421 605
VAPARIDZI 1 614 244
ZVIDZIDZO ZVEBHAIBHERI 842 091
Kurasika Kwavo Kwakaita Kuti Vatange Chidzidzo cheBhaibheri
Zvapupu zvakabva kune dzimwe nyika kusanganisira zvemuEngland zvakanakidzwa zvikuru negungano renyika dzakawanda rakaitirwa muguta reLondon. Andrew naElizabeth vakaenda kune imwe hotera muLondon vachida kunokwazisa vaenzi vakanga vabva kune dzimwe nyika. Paakaona mumwe mukadzi akanga akapfeka zvakanaka ari panosvikira vanhu, Elizabeth akafunga kuti aiva mumwe wevaenzi vacho saka akamumbundira nemufaro. Mukadzi wacho akashamisika chaizvo, saka Elizabeth akamukumbira ruregerero. “Ndine urombo,” akadaro. “Ndafunga kuti muri muenzi wedu!”
“Muenzi wenyu?” mukadzi wacho akabvunza.
Elizabeth akanongedzera chikwangwani chaiva nemashoko ekugamuchira Zvapupu zvaJehovha uye akashamiswa nezvakataurwa nemukadzi wacho. “Ii, inga zvinofadza!” akadaro. “Asi ndiri kutoita semumwe weZvapupu zvaJehovha?”
Pavakanga vachikurukura, Elizabeth akaziva kuti mukadzi wacho ainzi Vivien, uye kuti vaigara pedyo nepedyo uyewo kuti kumusha kwake kuNigeria. Vivien akabvuma kudzidza Bhaibheri uye aida kuti vana vake vabatanewo naye pakudzidza. Andrew naElizabeth vakashanyira Vivien kumba kwake uye vakabva vambundirwawo nemufaro. Kungosanganawo kwavakaita pakati peguta reLondon kwakaita kuti Vivien asare aoma mate mukanwa. Andrew naElizabeth pavakaratidza Vivien bhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei?, vakashamisika achivaudza kuti aitova naro uye kuti anoriverenga pamwe chete nevana vake vana. Vivien paakaudzwa kuti bhuku iri ndiro rinoshandiswa pakudzidza nevanhu Bhaibheri vasingabhadhari, akapindura nemufaro achiti, “Ngatibva tatotanga kuridzidza!”
Tsamba Yakabva Kuhama Yerudzi rwechiRoma
Muna November 2014, muSlovakia makaumbwa ungano yekutanga yemutauro wechiRomany. Pagungano redunhu richangopfuura, vaparidzi 21 vanotaura chiRomany vakabhabhatidzwa. Vese vakabva kunzvimbo imwe chete. Vanhu vakapinda Chirangaridzo neungano yechiRomany vakasvika 495. Imwe hama ichangobva kubhabhatidzwa yakanyora kuti:
Slovakia: Vaparidzi veUmambo vaviri vachiparidzira mashoko akanaka kumukadzi wechiRoma
“Ndiri mumwe wevanhu verudzi rwechiRoma vanobva mumusha weŽehra, kuSlovakia. Kwandinogara vanhu vakawanda vechichena vanotarisira pasi uye vanotiona sevanhu vane utsvina, vanonyepa, uye vanoba. Pandakaenda kuchechi, muchengeti wepo akandiudza kuti ndaisakodzera kuva ipapo saka akabva andidzinga. Chimbofungai kuti pashure pekubatwa seizvi ndakanga ndava kuona sei vanhu vechichena! Ndakazokokwa neZvapupu zvaJehovha kuImba yoUmambo. Ndakangoendawo hangu asi ndichifungira kuti vaizondibatawo nekuseri kweruoko. Ndakashamisika kuti ndisati ndatombopinda muImba yoUmambo, mumwe murume wechichena akandikwazisa uye akandigamuchira zvakanaka. Ndakatadza kuteerera paipiwa hurukuro yavose. Ndainge ndichingofunga kuti, ‘Seiko munhu wese ari kundifarira kudaro?’
“Usiku ihwohwo handina kurara ndichingofunga zvakanga zvaitika kuImba yoUmambo. Saka ndakafunga kudzokerazve kuti ndione kuti mabatirwo andakaitwa zvaisangova zvemusi mumwe chete here. Pandakadzokera, vanhu vaivako vakandibata zvakanaka kutopfuura pakutanga uye vakatondibata seshamwari yavo yemakore. Handina kuzomborega kupinda misangano, uye nokufamba kwenguva ndakazobhabhatidzwa. Pashure pekunge ndabhabhatidzwa, hama hadzina kumborega kundiratidza mutsa uye dziri kuramba dzichiratidza kuti dzinondikoshesa. Dzimwe nguva vanotondipa zvekudya zvakanaka kupfuura zvavanodya ivo! Ndinoda kuramba ndiri musangano iri, uye Jehovha ndiye Mwari wandinoda kushumira nekusingaperi.”
Munyengetero Wekuparidza Mashoko Akanaka Unopindurwa
Imwe hanzvadzi inonzi Aysel yakakwira bhazi ichibva muguta reGanja ichienda kuBaku muAzerbaijan. Yakanyengetera kuna Jehovha ichikumbira kuti iwane mumwe munhu wekutaura naye nezveBhaibheri iri munzira. Kunyange zvazvo Aysel akanga atopiwa nzvimbo yake yekugara mubhazi, mumwe mukadzi akasimbirira kuti auye kuzogara naye. Aysel akatanga kutaura nemukadzi wacho uye akazopedzisira achinja nyaya ndokutanga kutaura nezveBhaibheri. Mukadzi wacho akataura kuti anoda Jesu uye anoda kuziva zvakawanda nezvake. Vakabva vapanana nhamba dzefoni uye vakarangana kuzoonana zvakare. Mukadzi wacho akakumbira Aysel kuti kana zvichiita amuvigirewo Bhaibheri.
Aysel paakadzokera kuGanja, akashanyira mukadzi uya kubasa kwake. Mukadzi wacho akataura kuti ane “bhuku remunamato” raanoverenga zuva nezuva. Hanzvadzi yedu yakashamisika payakaona kuti bhuku racho rainzi nderemunamato raiva kabhuku kaKuongorora Magwaro Zuva Nezuva ka2013! Chidzidzo cheBhaibheri chakabva chatotangwa, uye Aysel akafara kuti Jehovha akamupa ushingi kuti aparidzire zvisina kurongwa.
Tsamba Yekutenda Yakabva Kumusungwa
Tsamba inotevera inobva kuSpain:
“Kutanga, ndinoda kukutendai nekushanda nesimba kwamuri kuita kuti musvitse mashoko eBhaibheri kuvanhu vemarudzi ose.
“Ndakaonana neZvapupu zvaJehovha kekutanga makore 15 adarika muTiranë, kuAlbania. Ndakashamisika kuti chii chakaita kuti chimwe Chapupu chive neushingi hwekutaura nesu nekuti taiva chikwata chevakomana vechidiki gumi chaiita zveundururani. Hapana aiva neushingi hwekutaura nesu, asi hama iyoyo yakataura nesu pasinei nekuti tainge takapakata zvombo. Haina kana kumbotya kutaura nesu nezveBhaibheri. Ushingi hwayo hwakandishamisa chaizvo.
“Makore mana apfuura, chimwe Chapupu chakandishanyira mujeri kuno kuSpain uye chakakumbira kudzidza neni Bhaibheri. Ndakabvuma uye kubvira ipapo unhu hwangu hwachinja. Handichafariri zvekurwa, uye handisisina hasha. Patopfuura makore akawanda ndisina kumbopinda mutsekwende. Ndava kuziva Jehovha, uye izvi zviri kuita kuti ndive neupenyu hune chinangwa. Ndinoedza kuva nerugare nemunhu wese uye patopfuura gore ndichishumira semuparidzi asati abhabhatidzwa.
“Kunyange zvazvo ndava nemakore 12 ndiri mujeri, ndava nemakore mana ndichifara uye ndine rugare rwepfungwa rwandisina kumbobvira ndawana. Ndinogara ndichitenda Jehovha zuva nezuva nemhaka yaizvozvo.
“Mavhiki apfuura ndakaona mamwe mavhidhiyo epajw.org. Vhidhiyo yeimwe hama yaimbova mujeri kuUnited States yakandibaya mwoyo. Handisi munhu anokurumidza kuchema, asi pandakaona kuchinja kwakaita hama iyi, misodzi yakatanga kuyerera.
“Dai Jehovha akaramba achikomborera kushanda nesimba kwamuri kuita kuti musvitse mashoko akanaka kuvanhu vemarudzi ose nekuashandurira mumitauro yakawanda uyewo kushanyira kwamuri kuita vaya vari mumajeri sesu.
“Iye Zvino Ndinonyatsonzwa Kuti Ndazorodzwa”
“Ndaigara ndichingonzwa sekuti upenyu hwangu hauna kana kwahwakananga uye ndaingodzungaira ndichitsvaga rugare rwepfungwa ndichirwushaya,” akadaro Felicity, ane makore 68 uyo anogara kuSweden. Felicity paasina kugutsikana nedzidziso dzechechi yeRoma akabva atanga kuongorora zvinotaurwa nezvitendero zvakasiyana-siyana uye akapedzisira anyura mune zveuroyi nezvemidzimu.
Paasina kuwana chinangwa muupenyu, akaora mwoyo zvekuti akasvika pakuda kuzviuraya. “Misodzi ichiyerera pamatama, ndakashevedzera kuna Mwari ndichikumbira kuti andiudze zvaaida kuti ndiite. Pashure pemavhiki maviri, ndakanzwa pasuo rangu pachigogodzwa zvinyoronyoro. Mumwe murume wechidiki akandibvunza achinyemwerera kuti ndaida here kunzwa Shoko raMwari. Ndakati nechemumwoyo: ‘Aiwa Mwari, ndanga ndisingarevi kuti mutume Zvapupu zvaJehovha!’”
Akambofunga kuvhara dhoo panguva iyoyo, asi akazosarudza kuteerera uye akabvuma kudzidza Bhaibheri pachishandiswa bhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei? Anoti, “Zvakaita kuti nditange kuona Bhaibheri neimwe nzira.” Felicity akabhabhatidzwa pagungano remunharaunda rakaitwa kuSweden muna 2014. Iye zvino anoti: “Izvi ndizvo zvandaitsvaga kweupenyu hwangu hwese. Iye zvino ndinonyatsonzwa kuti ndazorodzwa.”